Makedonia: Ezaka eny ifotony hiarovana ny mozika Folk antserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2018 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, 繁體中文, 简体中文, Français, Español, English
Zava-miavaka eo amin'ny kolontsaina Makedoniana ny fankasitrahana ny hira folk, ary noho ny ezaka be nataon'ny bilaogera iray, niely tamin'ny tontolon'ny bilaogy ihany koa izany.
Amin'ny maha lovan'izao tontolo izao, nankafy sy nampiasa indray izao tontolo izao, indraindray tsy misy filazàna izay tompony ny hira Makedoniana nentim-paharazana.
(Lahatsary: Tanana maro isan-karazany manao feo nentin-drazana avy ao Makedonia “Jovano, Jovanke” ao Kyushu, Japan.)
Vazivazy fahiny antserasera momba ny fitsarana an-tendrony Yogoslavy teo aloha – izay efa niely nandritra ny 12 taona farafahakeliny – no milaza fa iray amin'ireo tombontsoa voalohany 10 amin'ny maha-Makedoniana ny:
4. Malahelo sy mijaly ianao rehefa mihaino hira folk.
Nihitatra any amin'ny fotoana mahafinaritra [fialam-boly] ihany koa ity sehatra ara-kolontsaina ity, araka ny fanamarihana nataon'i Katarina Karcolova mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny EVS tamin'ny lahatsorany tao amin'ny vavahadin'ny tanora Mladi!nfo:
Marobe ny zavatra itovizan'ny tanora eto amin'ireo tanora Slovaky, saingy misy fahasamihafana lehibe iray izay tena tiako. Ny fiarovana ny fombam-bahoaka, ny hira ary indrindra ny dihy izany. Ohatra, raha misy fety any an-trano, mahazatra ny mihaino hira nentim-paharazana. Amin'ny ankapobeny, tsy ny fihainoana ihany fa ny fihirana sy ny fandihizana ihany koa. Rehefa nanontany aho hoe mpikambana ao amin'ny vondrona vako-drazana ve ireo olona ireo satria mahay mandihy be ry zareo, dia nilaza tamiko izy ireo fa tsia. Manankarena ny vakodrazana Makedonianina ka mirehareha amin'izany sy te-hitazona izany izy ireo.
Ny fandrosoana lehibe indrindra vao haingana mifandraika amin'ny hira folk sy ny poezia ao amin'ny tontolon'ny blaogy Makedônianina dia ny mamindra ny votoatin'ny bilaogy Hira Folk Makedoniana ho sehatra iray manokana sy tolotra fampiantranoana – pesna.org (ny teny hoe “hira” sy “tononkalo” amin'ny teny Makedoniana ), ahafahan'ny mpanoratra azy Zoran Stalevski, antsoina hoe GoodBytes ihany koa, hanampy tetikasa maro hafa, toy ny karazana fandaharana samihafa, ary safidy amin'ny fandikan-teny ho amin'ny teny anglisy, frantsay ary alemà. Ankoatra izany, nanambara izy fa:
... Navadika ho alfabeta Latinina ny hira rehetra. Ohatra, “А бре Македонче (A bre Makedonche)” [MKD]. Mba hahazoana ity dika ity, tsindrio eo amin'ny hihy “Voadikantsoratra.” Hanampy zavatra roa izany farafahakeliny: afaka mamaky ny lahatsoratra mora kokoa ireo vahiny, ary afaka manamora ny fidirana amin'ny milina fikarohana izany, izay matetika tsy mampiasa na tsy afaka mampiasa ny endritsoratra Sirilika ny mpiserasera.
Ny tahirim-peon’ny hira dia tsy voafetra ho iray minitra intsony, fa noho ny fangatahana ankapobeny, dia alefa feno izy ireo. Na izany aza, mba tsy hanitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, dia navadika ho kaody 32kbps ireo mp3s azo trohina. Ampy handrenesana ny hira na “manana azy” izany saingy tsy misy mpankafy feo na hira ho afa-po amin'ny kalitao ambany tahaka izany. Ka noho izany, mieritreritra aho fa hividy ireo hira tiany izy ireo amin'ny hoavy. Ary raha te hizara ny sasany amin'ireo zony tamin'ny fampisehoana noraketina ny sasany amin'ireo mpiangaly mozika, dia ho faly aho handefa ny endrika tsara kalitao amin'ny hira.
Nanambara ihany koa i Stalevski fa mikasa hamatsy vola ny tranonkala amin'ny volany manokana izy mandra-pahafatiny, miaraka amin'ny fanampiana avy amin'ny dokambarotra an-tserasera. Tao anaty tafatafa tao amin'ny It.com.mk, niaiky izy :
Nanomboka ny tetikasa ho toy ny fialam-boliko manokana aho, fa koa noho ny fikomiana, satria mbola mampiasa solosaina indrindra indrindra hilalaovana Solitaire ireo sehatra karamaina hampiroborobo ny lova ara-kolotsainay rehefa miandry ora.
Amin'ny fanangonana ireo hira, nanaraka ny tsongatenin'i Gandhi aho fa “tsy maintsy ianao no fiovana tianao ho hita eto amin'izao tontolo izao.” Satria nitombo ny fanangonana, nanomboka nahazo dera, toro-hevitra sy fanampiana mivantana tamin'ny lahatsoratra na horonam-peo avy amin'ireo mpitsidika izay tia mozika vakoka aho. Ity fanohanana avy amin'ny olona manerantany ity, anisan'izany ireo vahiny liana amin'ny fiteny, kolontsaina sy mozika nentim-paharazana Makedoniana no nanome aingam-panahy ho ahy hanohy hampanankarena ny tranonkala. Tsy mila fanampiana ara-bola aho, satria tsy dia lafo ny famoahana amin'ny aterineto. Saingy afaka mahazo tombontsoa avy amin'ny rakitra am-peo maro, indrindra amin'ireo hira tsy fandre firy, izay saika tsy mety hita amin'ny fantsona fanarahan'ny besinimaro ny tetikasa. Misy ny filàna lehibe amin'ny fampidirina an'aterineto ny tahiry horonam-peo/horonan-tsarin'ny Radio & Televisiona Makedoniana, izay manafina harena sarobidy, lò ao anaty lavaka maintin'ny “haino aman-jerim-bahoaka”. Azo antoka fa ireo etnôlôgy na mpanangona – olona izay sarotra hitako no tompon'ny sasany amin'ireo fitaovana vitsivitsy.
Mampiasa Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 License ny Vako-drazana Makedoniana. Miaraka amin'ny hira maherin'ny 640, mety ho karazana fanangonana tsara indrindra ao amin'ny aterineto izany. Nanamarika ny Archeological Diary fa nampiasaina ho loharanon'ny votoaty ho an'ny Wikipedia amin'ny fiteny Makedoniana izany.
(Lahatsary: Oneself76 mihira ny “Jovano, Jovanke”. Nahazo fanehoan-kevitra tsara avy amin'ireo mpisera Youtube ao Makedonia sy any am-pielezana ny “cover” nataony.)